Kusukela ekuqaleni kwenkathi ehlobo esuka ezizimele izakhamuzi abanikazi amakhaya ehlobo kukhona ukukhathazeka mayelana ngcono endaweni eseduze endlini. Ikakhulukazi, ukuze umhlaba ke waba i ukubukeka ekhangayo futhi uzilungise kahle, kumelwe okungenani ukuqinisekisa ukuthi utshani otshanini lalihlale ukusikiwa.
Ukuze lo msebenzi, imishini engadini emakethe has ezihlukahlukene imishini, phakathi okuyinto idivayisi elula yokulawula utshani - brushcutter. Kodwa naphezu alula, ukuthengwa kuyadingeka ukuze wenze izinqumo ezinhle, njengoba imodeli ngayine inezidingo zayo ezinhlangothini zalo emihle nemibi, futhi ukuba umuntu amane nje ongakhetha kuzo uhlelo abakhiqizi emhlabeni eyaziwa. Ngokwesibonelo, Stihl futhi Echo - abenzi ezivela emhlabeni wonke, ukunikela abathengi imikhiqizo high quality. Kunzima ukunquma phakathi ezibanzi imikhiqizo, okuzoba brushcutter kangcono. Ikhasimende libuyekeza kaningi futhi amsize akhethe okuhle.
Indlela uzulazule Izibuyekezo
Njengomthetho, umuntu ngamunye ukuze uthole ukuthi yini brushcutter engcono, ufunde izibuyekezo omuhle kuphela. Lokhu akulungile, njengoba kunoma iyiphi idivayisi futhi sinezici engafanele esingazithola zonke negates izinzuzo. Phela, kungakhathaliseki imodeli iyiphi brushcutter enze kahle imisebenzi yayo, nobuthaka bayo ngokuvamile kufihlakele emehlweni womuntu futhi baziwa kuphela ngesikhathi ukusebenza. Ngakho, izimpendulo ikwenza kucace ukuthi ncamashi kungalindeleka ngesikhathi ukusebenza imodeli. Futhi acabangele isidingo zombili emihle nemibi.
Uhlaziyo libuyekeza Stihl
Naphezu abakhiqizi owaziwa, brushcutters Stihl ukubuyekeza nezincomo awavamile ezimbi, kodwa noma kunjalo akhona. Ngokwesibonelo, cabangela brushcutter Stihl FS 38 udumo kokuba phakathi balimi. Nokho, njengoba yaboniswa abasebenzisi abaningi kokuhlinzwa, ukuphila service kwalesi imodeli incane, njengoba yakhelwe ukusebenza on iziza ezincane. Ngaphezu kwalokho, lokhu brushcutter has Izibuyekezo nokuthi ukulungisa ibiza kakhulu ngenxa yezindleko okusezingeni eliphezulu izingxenye ezisele. Ngenxa yalokho, lezi zici ezimbi abangazazi negates izinzuzo obonakaliswe isisindo ongaphakeme, kalula zokusebenzela kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo injini.
Uhlaziyo nokubuyekezwa Echo
motokosy Japanese Echo anezici esihle kuzo zonke nemingcele lobuchwepheshe. Ezimweni eziningi, mayelana Echo-mowers Izibuyekezo bathi kuyinto kumadivayisi okuthembekile, engesiyo ezimbi, ngisho ukusebenza kalula abasebenzisi abanganaki.
Ngokwesibonelo, brushcutter Echo le SRM-2305 SI zonke aneliseke umsebenzi wabo, kodwa hhayi isenzakalo esisodwa sabhalwa lapho line ukudoba, okuyinto ngokwayo kumelwe lunikezwe nge ukukhanya hit ekhanda, saphela ukwenza kanjalo. Kwezinye izimo, lapho uzama ukulungisa ikhanda isimo ngokuvamile ehluleka. Lezi izimo ayesezindaweni ezingazodwa, kodwa bona namanje abangu kakhulu spoilt izinzuzo ezimangalisayo lokhu model. Ngenxa yalokho, le brushcutter wathola Izibuyekezo ezingezinhle kuphela trifles. Nokho, ngokuvamile kwenzeka ukuthi isamba sonke brushcutter imininingwane negative atholwe engenzi ivumelane umnikazi. Basuke ikakhulukazi kubonakala uma kukhona into ukuqhathanisa, isibonelo, ne imishini efanayo umakhelwane ongenayo akhononde umsebenzi wakhe. Lapha, ngisho nasezintweni ezincane nomthelela endleleni, lokho okufunekayo kuyoba brushcutter, ukubuyekezwa zazo plan onjalo. Ngemva kokufunda Izibuyekezo ezingezinhle akubonakali zikhanga kangaka emehlweni umthengi njengoba kwakunjalo ekuqaleni.
Ngakho, akukho nqubo ephelele, kodwa, uholwe ukubuyekezwa, ungakwazi ukuqonda ukuthi yini okufanele uyilindele kusuka imodeli ekhethiwe nokuthi lezi zinkinga bese ukulwa uma sezenzekile.
MMA: izici kanye ngezigaba
Indlela yenza briar
Povysheva Alena ( "Yini Kuphi Lapho ???"): Biography kanye nempilo yakho
Classic Swedish embonini yezimoto - Volvo XC 90